Snapdragon 845 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုထုတ်ဖော် | Androidsis
Snapdragon 845 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
မိုဘိုင်းဖုန်းပရိုဆက်ဆာများတွင် Qualcomm သည်ဈေးကွက်တွင်အငြင်းပွားဖွယ်မရှိချေ။ သူတို့၏ Snapdragon ပရိုဆက်ဆာများကြောင့်သူတို့နှင့်အနီးကပ်ဆုံးပြိုင်ဘက် MediaTek ထက်သာလွန်သည်။ ဒီနှစ်မှာတော့ငါတို့ဘယ်နှစ်ယောက်တွေ့ခဲ့ပြီလဲ အဆင့်မြင့်ဖုန်းများသည် Snapdragon 835 ကိုလောင်းကစားခြင်းဖြစ်သည် သင့်ရဲ့ Processor ကိုအဖြစ်။ ဒီအဆင့်မြင့်ပရိုဆက်ဆာကိုဆက်ခံထားပြီးဖြစ်သည် Snapdragon 845.
ဒါကဖြစ်ပါသည် အသစ်က high-end ပရိုဆက်ဆာ လာမည့်နှစ်၏အထင်ရှားဆုံးဖုန်းအချို့ကိုရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုကုမ္ပဏီ၏။ သူတို့တွင် Xiaomi က Mi7သို့မဟုတ်အမေရိကန်နှင့်အာရှမူကွဲများ Samsung ရဲ့ Galaxy S9။ မနေ့ကဒီပရိုဆက်ဆာရဲ့ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
Snapdragon 845 သည်၎င်းကိုဆက်ခံသူများ၏နောက်လိုက်အတိုင်းလိုက်မည်ဟုကတိပေးသည်။ ဒါကြောင့်သူကသူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုထင်ရှားစေမယ့်ပရိုဆက်ဆာတစ်ခုပါ။ တကယ်တော့ဖြစ်လိမ့်မည် Snapdragon 835 ထက်ပိုမိုအစွမ်းထက်ပြီးအကျိုးရှိသည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ပရိုဆက်ဆာတစ်မျိုးကိုတွေ့နေရတယ်။
အကြောင်း Snapdragon 845 ၏ပထမဆုံးသတ်မှတ်ချက်များငါတို့သည်လည်းထိုစှဲရ။ သူတို့သည်အလောင်းအစားပြုလုပ်မည် 10 nanometer ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၇ နာနိုမီတာခန့်မှန်းထားသူအများစုကအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်တော့မဖြစ်နိုင်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်း Processor သည် SoC of ဖြစ်ပုံရသည် ရှစ် cores။ သူတို့ထဲကလေးယောက်ဖြစ်လိမ့်မည် Cortex A-75 နှင့်လေးယောက် Cortex-A53။ ဂရပ်ဖစ်အပိုင်းမှာရှိနေတုန်း၊ Adreno 630.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဓာတ်ပုံစနစ်များနှင့်လိုက်ဖက်တဲ့အတွက်တိုးတက်မှုကိုလည်းမျှော်လင့်ရသည်။ ဤအချိန်သူတို့တစ်တွေအပေါ်လောင်းပါလိမ့်မယ် 25 megapixels အထိကင်မရာနှစ်လုံးအတွက်ထောက်ပံ့မှု။ ရှေ့နှင့်နောက်ကင်မရာနှစ်ခုလုံး။ ထို့အပြင်ဆက်သွယ်မှုအရ X20 modem ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ သူကပေးဆပ်မှုတာဝန်ခံဖြစ်သွားသည် 1,2 Gbps အထိမြန်နှုန်းရှိသော WiFi ကွန်ယက်ကိုအထောက်အပံ့ပေးသည်.
Qualcomm မှ Snapdragon 845 ကိုတရားဝင်ကြေငြာခြင်းမရှိသေးပါ။ အရာအားလုံးကပြသသော်လည်း၎င်းသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်အစတွင်ရောက်ရှိမည်ဟုဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်ယခုနှစ်ပထမသုံးလတွင်တင်ဆက်မည့်အဆင့်မြင့်ဖုန်းများတွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျနော်တို့တွေ့ဆုံရန်မျှော်လင့်ပါတယ် Snapdragon 845 ကိုလာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Snapdragon 845 ၏ပထမဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များပေါက်ကြားခဲ့သည်
Microsoft ၏ browser Edge သည် Google Play စတိုးသို့စတင်ရောက်ရှိသည်